Guddoomiyaha Baarlamaanka oo soo dhaweeyay dowrka warbaahinta dowladda – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa u hambalyeeyay shaqaalaha wasaaradda warfaafinta, isagoo tilmaamay in howl adag ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed.
“Dowrka uu leeyahay SNTV iyo dowrka Radio Muqdisho wuu ka duwan yahay dowrka ay leeyihiin Raadiyeyaasha kale iyo TV-yada kale ee gaarka loo leeyahay” ayuu yiri Guddoomiye Jawaari oo sheegay in masuuliyadda hay’addan ay tahay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay gaarsiyaan wararka iyo waxa ka jira waddankooda.
“Dastuuryan, waxaan si gaar ah Mahad uga celinayaa dowrka SNTV iyo Radio Muqdisho ay ka qaataan tabinta howlaha iyo howl-qabadka golaha shacabka, dastuuriyan kulammada baarlamaanka waa kuwo dadka shacabka ah u furan, maaddaama ay dadku meelo badan uu kala joogo (Imaan Karin fadhiyada)waxaa kaalintaas gacan naga siiyay TV-ga qaranka iyo Radiyo Muqdisho.
Sidoo kale wuxuu guddoomiyuhu sheegay in sanadkan dowladda ay u taallo shaqo badan isla markaana looga baahan yahay warbaahinta dowladdu inay qeyb weyn ka qaadato sidii shacabka Soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa howlaha ay dowladda Soomaaliyeed hirgalinayso, ayadoo aragtida shacabka la soo baahinayo si loo gaaro hiigsiga 2016-ka.
Hay'adaha ammaanka Uganda oo heegan la galiyay